Collage Maker ee Soomaaliya
Ka saar asalka
Photoshop khadka tooska ahTifatiraha sawirkaTifatiraha SawirkaSoftware tafatirka sawir
Booqo goobta Wax dheeri ah baro
Barnaamijyada iPhone ee loogu talagalay Iskuduwaha Iskuduwaha
Weligaa isku dayday inaad sameysid iskudhaf adiga kuu gaar ah? Hadaadan wali wali gaarin, waxaa kaa dhiman khibrad farxad galin karta adiga iyo qoyskaagaba. Samaynta wadajirka ayaa ah fursad qaas ah oo hal abuurnimo loogu sameeyo marin asal ah. Abuuritaanka gabal farshaxan shaqsi ah adoo adeegsanaya sawirkaaga oo keliya waa xiise xiise leh. Haddii aad haysato sawir aad jeclaan lahayd inaad isticmaasho, waxaa jira fursado badan oo aad ugu beddeli karto sawirkaas mid waxtar leh oo qurux badan.
Iyada oo kaliya qasabno yar oo jiirkaaga ah, waxaad yeelan kartaa iskudhaf sawir aad u gaar ah oo loo isticmaali karo khadka tooska ah ama barnaamijka tafatirka sawir xirfadle ah. Waxaa jira boqolaal tusaalooyin sawir-qaade oo bilaash ah oo bilaash ah oo laga kala xusho. Waxa kale oo aad ka heli kartaa arrimo bilaash ah oo aad ku soo dejin karto kombuyuutarkaaga. Qaar badan oo ka mid ah qaab-dhismeedka bilaashka ah ee khadka tooska ah ayaa leh naqshado horay loo soo dejiyey oo ku habboon bilowga. Si aad u bedesho naqshadda oo aad u beddesho muuqaalka shaxanka, waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ka dooranaya nashqadda miiska hoos u dhaca. Si fudud ku dar sawiradaada, hagaaji cabirka, dalagga, muuji, oo hagaaji midabada illaa aad ka heleyso natiijada aad rabto.
Moodooyinka sawirku waa fududahay in la isticmaalo. Kaliya dooro sawirka aad rabto inaad u adeegsato tusaale ahaan, buuxi macluumaadka, oo keydi. Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo ah qaabab loogu talagalay sawirrada. Qaar ka mid ah qaababkan waxaa ka mid ah: laba jibbaaran, goobaabin, leydilo laba jibbaaran, wadnaha, calaamadeynta laba jibaaran, baqshad, nacnac bouquet, bouquet buufin, majaajillo majaajillo, gidaar, ubax bouquet, saacad, wheel, rashka, hillaaca, geedka, kalandarka, xiddigga, timirta geedka, rashka la soo bandhigo, iyo geed timireedka kulaylaha. Jaangooyooyinkan waa la tafatiri karaa, la beddeli karaa, loona beddeli karaa qaab kasta oo aad rabto.
Ku biirista sawirku waa aalad ay adeegsadaan kuwa sameeya iskudhafyo kaladuwan si ay uga caawiyaan iyaga inay u habeeyaan una tifaftiraan sawirrada ka hor intaan loo soo gelin degel websaydh ama taleefanka gacanta shaqsiyeed Sawir qaadaha wuxuu ku shaqeeyaa adigoo sawir kaamerada kamarada ku dhajinaya kuna keydinaya qalabka. Kadib, waxay u rogtaa feylka qaab uu kombiyuutar akhrin karo. Marka feylka la galiyo, barnaamijku wuxuu kuu qaban doonaa shaqada inteeda badan. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso ayaa ah inaad sawirka ku shubto bogga aad dooratay, dooro qaab midab leh, hagaajiso cabirka iyo midabka qoraalka, waxaadna doorataa qaab-dhismeedka.
Qalab kale oo muhiim u ah sameynta kolajka waa tifaftire sawir. Qalabkani wuxuu aad ugu eg yahay sawir qaadaha. Waxay ku shaqeysaa qaab la mid ah halka aad ka dooraneyso isku-darka oo aad ku dhejinayso sawir. Si kastaba ha noqotee, halkii sawir laga abuuri lahaa sawirka aad dooratay, qalabkani wuxuu qaadi doonaa sawir jira oo wuxuu u rogi doonaa iskudhaf. Qaar ka mid ah astaamaha tifaftiraha sawirkan waxaa ka mid ah: jiidayo iyo ka soo daadinta walxaha bogga, goynta, hagaajinta dhalaalka iyo isbarbar dhiga, iyo miirayaasha ku dhajinaya sawirka.
Marka sameeyahaaga kolajka sameeya la diyaariyo, waxaad u baahan doontaa inaad tixgeliso noocyada istiikarka ah ee aad isticmaali doonto si aad u dhammaystirto. Istiikarada istiraatiijiga ah waxay ka kooban yihiin laba qaybood: istiikarada la taaban karo iyo istiikarada elektarooniga ah. In kasta oo aysan jirin waddo sax ah ama khalad ah oo lagu doorto nooca istiikarka ah ee la adeegsanayo, haddana waxaa jira faa'iidooyin iyo khasaaro nooc kasta ah. Tusaale ahaan, adiga oo adeegsada istiikar la taaban karo, waxaad u baahan doontaa istiikarka ka dib isticmaal kasta. Waraaqaha istiikarka ah ee elektaroonigga ah uma baahna in la nadiifiyo maxaa yeelay iyagu ma ahan wax sii gudbi doona.
Waxa kale oo aad u adeegsan kartaa tifaftiraha sawirka qalabkaaga android si aad u abuurto isku duubni ku duullimaadka. Xaaladdan oo kale, waxaad si toos ah ugu keydin kartaa sawirrada maktabadda sawirkaaga ama emaylka. Markaad sawir kaamaradaada gasho, kaamirada ayaa ku keydineysa xusuusta gudaha. Si kastaba ha noqotee, qalabku wuxuu awoodi doonaa oo keliya inuu keydiyo sawirrada aad ku soo rogto adoo adeegsanaya tifaftiraha sawirkaaga.
Qaar ka mid ah aaladaha caanka ah ee sameelee koleejka ee loo yaqaan 'iPhone' waa Coral Draw iyo Paintbrush. Barnaamijyadani waxay u oggolaanayaan dadka isticmaala inay ku rinjiyeeyaan burushyo, maqaarro, biyo-biyoodyo, iyo qalin qalin midab leh. Waxaa jira barnaamijyo kale oo badan oo loo heli karo soo dejinta loogu talagalay iPhone sidoo kale. Haddii aadan hubin aaladda aad jeclaan lahayd inaad isticmaasho, waxaad si fudud u soo degsan kartaa barnaamij bilaash ah.
Photoshop khadka tooska ah
Software tafatirka sawir
© Copyright 2021 sobestphotoeditors.online - All Rights Reserved
Boggan dalal / gobollo kale: